ပြေလျှော့သွားသော နှောင်ကြိုးများ – Grab Love Story
ကျနော့် နာမယ် သက်လွင်ဦးပါ
ကျနော်ပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းလေးက ဖြစ်ရပ်မှန်ကို အခြေခံထားတာပါ။
ကျနော် အဝေးသင်တက်နေတဲ့အချိန် အားအားယားယား သင်တန်းတွေချည်း ရှောက်တက်ဖြစ်ပါတယ်၊
သင်တန်းတွေတက်ရင်းနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ပေါင်းစုံရ အတွေ့အကြုံတွေလည်း ပေါင်းစုံရတော့တာပါပဲ။
သူငယ်ချင်းတွေ သင်ပေးရင်းနဲ့ အတတ်ကောင်းတစ်ခု တတ်လာတာကတော့ ဆေးချတာပဲ တော်တော်များများတော့ လုပ်ဖူးပေမယ့် အကြိုက်ဆုံးကတော့ အသီးပဲ
ဒီကောင်က ဆွဲပြီးသွားရင် ကိုယ်လုပ်ချင်တာ ကို မျောနေတော့တာ ဂိမ်းဆော့တဲ့ကောင်က ဂိမ်းကိုဖိဆော့ ဆော်ကြူတဲ့ကောင်က ဆော်ချည်းလိမ့်ကြူ စာဖတ်တဲ့ကောင်ကဖတ် ကိုယ့်အာရုံနဲ့ကိုယ်ပဲ ကျနော်ကတော့ အောကားတွေကြည့်ရတာ ဝါသနာပါတော့ ဆိုက်စုံမွှေရင်း ကြည့်လိုက်ဒေါင်းလိုက်ပဲ။
ကျနော် မိသားစုက ချမ်းသာတဲ့ မိသားစုထဲမှာ မပါဘူးဗျ၊ အဖေက အင်ဂျင်နီယာ အမေက ဆရာဝန် ဆိုတော့ ဝင်ငွေလေးကလဲ မဆိုးဘူးပြောရမှာပဲ၊
အမေဘက်က အမွေရထားတဲ့ ကွန်ဒိုလေးမှာ နေရတယ်ပေါ့ဗျာ၊ မောင်နှမ သားချင်းဆိုရင်လည်း ညီမလေး တစ်ယောက်ပဲရှိတော့ ချောင်ချောင်လည်လည်တော့ ရှိပါတယ်၊
အဲ့ဒီတော့ မုန့်ဖိုးလေးကလည်း များများစားစား ရတယ်၊ ဘာညာဖန်တာနဲ့ ဆိုရင် သူငယ်ချင်းတွေကြားမှ ပေးနိုင်ကျွေးနိုင် ရှိတယ်၊
တစ်နေ့ အဖေကနယ် သွားရတယ်၊ အိမ်မှာ အမေရယ် ညီမလေးရယ် ကျနော်ရယ် ကျန်ခဲ့တယ်၊ အမေကလည်း ညီမတစ်ယောက် အသည်းအသန် ဖြစ်လို့ဆိုပြီး ပဲခူးကို အရေးတကြီး ထွက်သွားရတယ်၊
ကျနော်လည်း အိမ်မှာမနက်ဆို ထမင်းချက် ညီမလေးကို မနက်စာကျွေးပြီး သင်တန်းကို သွားပေါ့။ ဒါနဲ့ ခင်ဗျားတို့ကို မိတ်ဆက်ပေးရဦးမယ်၊ ညီမလေး နာမည်က ချယ်ရီ.တဲ့ အသက်ကတော့ ၁၈နှစ်ပြည့်ပြီးပြီ
၁၀တန်းဖြေပြီးပေမယ့် လူကောင်ကတော့ သိပ်မထွက်သေးဘူး။ အသားဖြူဖြူ လုံးလုံးလေးပေါ့ဗျာ မျက်နှာလေးကတော့ အမေတူ အရုပ်ကလေးအတိုင်းပဲ စကားပြောရင် မပွင့်တပွင့်နဲ့ စိတ်ကောက်လိုက်တာလည်း လွန်ပါရော
သင်တန်းသွားတော့ ညီမလေးလည်း အိမ်စောင့်ပေါ့ ကိုရီးယားဇတ်လမ်းတွဲ ကြည့်လိုက် ဂိမ်းဆော့လိုက်ပဲ၊ ကျနော်လည်း သင်တန်းမှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့တော့ ပစ္စည်းပါလာတယ် ပြောတာနဲ့ တစ်တန်းယူထားလိုက်တယ်၊ အိမ်မှာလည်း လူကြီးတွေမရှိတော့ ခွင်ပဲပေါ့၊အိမ်ပြန်လာတော့ ညီမလေးက ရေချိုးနေတယ်နဲ့တူတယ် တံခါးကို တော်တော်ခေါက်လိုက်ရတယ်၊ ထွက်လာတော့ တဘက်လေးပတ်ပြီး ရေစက်လက်နဲ့ ကျနော်လဲခုမှ သတိထားမိတယ်၊ ညီမလေးလဲ အပျိုဖြစ်လာပြီပဲ ပတ်ထားတဲ့ မလုံမလဲ တဘက်လေးအောက်က ဖွံ့ထွားလာတဲ့ ရင်ဘတ်လေးတွေကို သတိထားမိတယ် ရေချိုးပြီးခါစ ရေစိုနေတဲ့ ဆံပင်ဂုတ်ဝဲလေးအောက်က ဂုတ်သားဝင်းဝင်းလေးရယ်
တင်ပါးလုံးလုံးလေးနဲ့ ခြေသလုံးဖြူဖြူလေးကို ကြည့်ရင်း စိတ်ထဲမှာတောင် တစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်၊
ကျနော်လည်း ရေမိုးချိုးပြီး ပါလာတဲ့ ပစ္စည်းလေးကို ဖြုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေလိုက်တယ်
ညီမလေး အခြေအနေကြည့်တော့ ထမင်းစားပြီးလို့ သူ့အခန်းထဲမှာ တီဗွီကြည့်နေတယ်၊
ကိုရီးယားကား ကြည့်နေတယ် ဖိုးသက် ထမင်းစားပြီးပြီလား
ကိုကို မစားသေးဘူးညီမလေး အိမ်စားလေးတွေ လုပ်လိုက်ဦးမယ်
ညီမလေးက ကျနော်ကို အမေတို့ခေါ်တဲ့အတိုင်းပဲ ဖိုးသက်လို့ပဲခေါ်တယ်၊
အဲဒါနဲ့ အေးဆေးပဲဆိုပြီး ကိုယ့်အခန်းကို ပြန်လာ ဖြုတ်စရာရှိတာ ဖြုတ်နေလိုက်တယ်
သုံးကောင်လောက် ကုန်တော့ မဆိုးဘူး။ ရောက်သင့်သလောက် ရောက်နေပြီ၊
ဒီတစ်ခါ ဟိုကောင်တွေပေးတဲ့ ပစ္စည်းမဆိုးဘူး ကောင်းလဲကောင်းနေပြီမို့ ဝါသနာအတိုင်း အောကားတွေကြည့်လိုက် ဒေါင်းလိုက်နဲ့ အလုပ်တွေရှုပ်တော့တာပဲ၊
ဆိုက်တွေမွှေရင်းနဲ့ ဆကျvideos ထဲက related post တွေမှာ မောင်နှမအရင်းတွေ ဇာတ်လမ်းဖြစ်တဲ့ အကြောင်းတွေ ပေါ်လာလို့ လိုက်ကြည့်ရင်းနဲ့ စိတ်တွေလည်း တော်တော်ထန်လာတယ်၊ ခဏနေတော့ မီးခြစ်က ပျက်သွားတာနဲ့ အဖေတို့ အခန်းထဲကို မီးခြစ်သွားရှာဖို့ ထွက်လာတယ်၊
ညီမလေး အခန်းရှေ့ရောက်တော့ တံခါးစိထားတာနဲ့ အသာဟပြီး ကြည့်လိုက်တော့ ဆရာမကြီးက ပင်တီလေးနဲ့ မှန်ရှေ့မှာ အိုက်တင်တွေ လုပ်နေလေရဲ့ အိမ်နေရင်း တီရှပ်ပါးလေးနဲ့ ပင်တီအနီကြားလေးနဲ့ ပို့စ်အမျိုးမျိုး လုပ်နေတဲ့ ညီမလေးကိုကြည့်ရင်း
ခုနကကြည့်နေတဲ့ အောကားထဲက မောင်နှမကို သွားသတိရတယ် စိတ်ထဲမှာလဲ တစ်မျိုးကြီးဖြစ်လာတာနဲ့
မသင့်တော်ပါဘူးလေဆိုပြီး ညီမလေးမသိအောင် အသာလစ်ထွက်လာလိုက်တယ်။
အဖေတို့ အခန်းထဲရောက်တော့ မီးခြစ်ကို လှန်လှောရှာရင်း အံဆွဲထဲမှာတွေ့တယ်
ပြီးတော့ Viragra ဆိုတဲ့ ဆေးဘူးရော ကွန်ဒုံးတွေရော ငါ့အဖေလဲ ငထန်ပဲဟလို့ တွေးရင်း ငါလဲဂွင်းထုလို့ကောင်းအောင် စမ်းပြီးသောက်ကြည့်အုံးမယ်ဟု
နှစ်လုံးလောက် ပါးစပ်ထဲပစ်ထည့် ရေသောက်ပြီး မီးခြစ်ယူထွက်လာလိုက်တယ်
အခန်းပြန်ရောက်တော့ ပစ္စည်းထပ်တင်နေရင်း အောကားဆက်ကြည့်နေတာ
ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက်ကြာတော့ ပူထူလာသလိုဖြစ်ပြီး လီးကလဲ ပေါက်ထွက်တော့မတတ် တောင်လာတယ်
ပစ္စည်းအရှိန်နဲ့ ဖီးလ်တွေလဲစွတ်တက် ဂွင်းထုတော့လဲ ပြီးသွားတာနဲ့ ပြန်ထောင်လာတယ်၊ အဲဒါနဲ့ အောကားကြည့်လိုက် ဂွင်းထုလိုက်နဲ့ တိုင်ပတ်နေတုန်း ညီမလေးက တံခါးမခေါက်ပဲ အခန်းထဲ ဝင်ချလာပါလေရော ကျနော်လည်း တံခါးပိတ်ဖို့ မေ့သွားတယ်။
ဖိုးသက် နင်ဘာတွေလုပ်နေတာလဲ ကွန်ပြူတာကြီး ကြည့်ပြီးတော့
ကျနော်လည်း ပုဆိုးကို အသားဖုံးရင်း ကြောင်ကြည့်နေတုန်း ဒင်းက ဇိုးဇိုးဇတ်ဇတ်နဲ့ ဝင်လာတယ်
နင်ထမင်း မစားသေးလို့ ဘာတွေများလုပ်နေလဲလို့
ကျနော်လည်း ကြည့်နေတဲ့ ကားလေးကို အမြန်ပိတ်နေတုန်း ဆွဲနေတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို သိမ်းဖို့မမှီတော့ဘူး။ မထူးတော့ပါဘူး ညီမလေးကို ညာပြောပြီး သူ့ကိုပါ တိုက်လိုက်မှ တော်ကြာ အမေတို့ ပြန်လာလို့ ပြန်တိုင်ပြောနေမှ ဒုက္ခပဲလို့တွေးရင်း တောင်နေတဲ့ ကောင်လဲ လန့်ပြီးပျော့သွားတယ်၊
ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဟာ အဲဒါ ထိုင်းကထုပ်တဲ့ အသားဖြူဆေးဟ သောက်ပြီးရင် ပျော်လဲပျော်လာတယ်၊
ဟုတ်လား အာ့ဆို ငါကိုလဲတိုက် ဒီအတိုင်းသောက်ရတာလား
ဟဲ့ နေဦး ဒီအတိုင်းမသောက်ရဘူး ငါလုပ်ပေးမယ်
ဆရာမကြီးက ဒီအတိုင်း သောက်မယ်လုပ်နေလို့ မနဲ့တားရင်း ခဲပြားအသစ်ပြင်လိုက်ရတယ်
သူက ဒီအတိုင်းသောက်လို့မရဘူး အငွေ့ကိုပဲ ရှုရတာ လာငါလုပ်ပြမယ်
သူ့ရှေ့မှာ တစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းလောက် ဆွဲပြပြီး သူ့ကိုလည်း ပိုက်ပေးပြီး ဒီအတိုင်း သောက်ခိုင်းလိုက်တယ်
အေး အသက်ရှိုက်သလို ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲ ရှုလိုက်၊ ပထမတော့ မဆွဲတတ်သေးပဲ သုံးလေးခါ ရှို့ပေးခါမှ နဲနဲ ဆွဲတတ်လာတယ်
မွှေးလိုက်တာနော် ဖိုးသက် အဲဒါတကယ် အသားဖြူလာမှာလား
အေး မနက်ဖြန်ဆို ဖြူလာလိမ့်မယ်
အဲဒါနဲ့ မောင်နှမ နှစ်ယောက်သား တစ်ယောက်တစ်လည့် ဆွဲရင်းနဲ့ သုံးလုံးလောက် ကုန်သွားရော ညီမလေးလဲ ကောင်းသွားတဲ့ ပုံစံပဲ စကားတွေလဲ တရစပ်ပြော ထပ်ဆွဲအုံးမယ်ဆိုပြီး ဂျစ်ကျနေလို့ ကျန်တဲ့နှစ်လုံးကို
ကိုကို ကုန်သွားပြီလား (မခေါ်စဖူး ကိုကိုတွေဘာတွေခေါ်လို့ အေးကုန်ပြီလေ နင်ချည်းပဲ လုပ်နေတာ အရမ်းမွှေးတယ်နော် ပြီးတော့ ဘယ်လိုလဲမသိဘူး အရမ်းပျော်နေတယ်
ဟုတ်လား နင်ပျော်ရင်ပြီးတာပဲ ညီမလေးရာ ကိုကို ဂိမ်းဆော့လိုက်ဦးမယ်နော်
ဂိမ်းဆော့မလိုပြောပြီး သူ့ကို ခုတင်ပေါ်ထားခဲ့ပြီး ကွန်ပြူတာဆီ ထလာလိုက်တယ်၊ ဒင်းကလဲ သူ့ဖုန်းကို အသည်းသန်ပွတ်နေတော့တာနဲ့ ကြည့်လက်စ အောကားတွေ ဆက်ကြည့်နေလိုက်တယ်၊
အောကားလေး Mode ဝင်သွားတာနဲ့ အောက်ကကောင်ကလည်း ပြန်ထောင်လာတယ် ပုံမှန်ထက်လည်း
ကြီးလာတယ် ကျနော်အရင်တုန်းကဆိုရင် ၅လက်မကျော်ရှိတဲ့ကောင်က လက်တစ်ထွာမက ကြီးလာသလို
လုံးပတ်ကလည်း လက်နဲ့ကိုင်လိုက်ရင် လက်ကိုပြည့်နေတာပဲ၊ ညီမလေးကို ကြည့်လိုက်တော့ သူ့ဖုန်းကိုပွတ်နေရင်းနဲ့ ဘာစိတ်ကူးပေါက်တယ်မသိဘူး။
ဝတ်ထားတဲ့ စကတ်လေးကိုချွတ်ပြီး တီရှပ်လေးနဲ့ ပင်တီလေးနဲ့ မှန်ရှေ့မှာ ပို့စ်တွေပေးနေတယ်၊ ပါးလေးဖောင်းလိုက် ပြုံးလိုက် ရင်လေးကော့လိုက် တင်ပါးလုံးလုံးလေးကို ကောက်လိုက်နဲ့
ကြည့်ရင်း တောင်နေတဲ့ကောင်က ကွဲထွက်တော့မလို တင်းလာတယ်၊
ဟဲ့ ဖိုးသက် ညီမလေးကို ကြည့်ပါဦး အလှမယ်ပြိုင်တဲ့ ကောင်မလေးတွေလို ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ ရပြီလားလို့
ဘာဖြစ်လဲ ကိုယ့်အကိုပဲ ငါမရှက်တော့ဘူး။ ပျော်နေလို့ ဟိဟိ ကိုကိုဂိမ်းဆော့နေတာလား ငါလဲဆော့မယ်လေ ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ ပေါင်ပေါ်ကို ဆွေ့ခနဲရောက်လာတယ်၊
ဟယ်ကိုကို နင် ဘာကားတွေကြည့်နေတာလဲ မပိတ်နဲ့ ငါလည်းကြည့်ချင်တယ်
ဒီကောင်မလေး ဒုက္ခပဲ တောင်နေတဲ့ကောင်ကို ပေါင်ကြားကို အသာညှပ်ရင်း ကြည့်နေတဲ့ အောကားကို ပိတ်ပေမဲ့မမှီတော့ မောက်စ်.က သူ့လက်ထဲကို ပါသွားပြီလေ
ဟွန့် ကိုကို နှာဘူးကြီး အောကားတွေ ကြည့်နေတယ်
ဟိဟိ ကိုကို ဆီမှာ အသစ်တွေရှိလား ငါတော့ သဇင်ကားပဲ ကြည့်ဖူးတယ် ကျောင်းမှာ သူငယ်ချင်းတွေပြလို့
ဒီကောင်မလေးတော့ ဒါတွေတောင် သိလို့ပါလား အင်းလေ ဒီလောက်ဖုန်းတွေပေါတဲ့ ခေတ်ပဲ ဒါတွေမဆန်းပါဘူး။ ဆရာမက Passion ကားတစ်ကားကို ကောက်ဖွင့်လိုက်တယ်၊ ဖြူဖြူချောချောလေးတွေ ရိုမာန်တစ်ဇတ်လမ်း
နမ်းကြပွတ်ကြသတ်ကြတာတော့ မဆန်းဘူး ကောင်မလေးက ကောင်လေးဘောင်းဘီကို အသာဆွဲချလိုက်ရော တုတ်ကြီးက ဖျောင်းကနဲ ထွက်လဲလာရော ဒင်းက အိကနဲ အော်ပြီး ကျနော့်ဘက်ကို လှည့်လာတယ်
လန့်သွားတာပဲ ကိုကိုရာ အကြီးကြီးပဲနော် သဇင်ကားထဲမှာ အဲလို မကြည်ဘူး မမြင်ရဘူးနော်
အခုဟာကြီးက ဟိဟိ ဘယ်လိုကြီးလဲမသိဘူး
ကောင်မလေး ချောချောငယ်ငယ်လေးက လီးအကြီးကြီးကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် စုတ်နေတာကို မျက်တောင်မခတ်တမ်းကို ကြည့်နေတယ် သူကြည့်ဖူးတဲ့ အထဲမှာ မှုတ်တာတွေဘာတွေ မပါဘူးထင်တယ်၊
ကောင်မလေးနဲ့ ကောင်လေး 69 ဆွဲတဲ့ အခန်းလဲရောက်ရော လှုပ်လှုပ်ရွရွ ဖြစ်လာပါလေရော သူငြိမ်ငြိမ်မနေတာ ကိစ္စမရှိဘူး ဝတ်ထားတာက အောက်ခံ ဘောင်းဘီ ပါးပါးလေး ပေါင်ပေါ်မှာ ရွစိရွစိနဲ့
အောက်က ညှပ်ထားတဲ့ကောင်က ရုန်းနေပြီ ကျနော်လဲစိတ်က လွတ်ချင်နေပြီ၊
ကိုကို သူတို့က ဘာလို့ အဲဒီလို လုပ်နေကြတာလဲ ရှက်စရာကြီး တခြားဟာကြည့်ရအောင်လေ
မောက်စ်ကို သူ့လက်ထဲကယူပြီး ကွန်ပြူတာထဲက Incest ကားတစ်ကားကို ဖွင့်လိုက်တယ်၊ ဇာတ်လမ်းက မောင်နှမနှစ်ယောက် ဟိုတယ်တစ်ခန်းထဲမှာ အတူတည်းရင်း စိတ်မထိန်းနှိုင်ပဲ လိုးကြတဲ့ဇာတ်လမ်း တဆင့်ပြီးတဆင့် ဆွဲခေါ်သွားတဲ့ ဇာတ်လမ်းကောင်းလေး ကျနော်လည်း အကြံနဲ့ဖွင့်လိုက်တယ်၊ ကြည့်ပြီးသားလေ
မောင်နှမဇာတ်လမ်းတဲ့ ငါလည်းမသိဘူး သူငယ်ချင်းတွေပေးတာ ရယ်ရတယ်တဲ့
ခပ်တည်တည်နဲ့ ရွှီးလိုက်တယ်၊ ဇာတ်လမ်းလာတော့ မောင်နှမနှစ်ယောက် အခန်းမရလို့ တစ်ခန်းထဲမှာ အတူတည်းရတာကစတယ် ရိုးရိုးပဲ အိပ်တဲ့အချိန်ရောက်တော့ ညီမဖြစ်သူက စိတ်ထကလိရင်း မနေနိုင်လို့ သူ့အစ်ကို အိပ်ယာကိုသွားအိပ်ပြီး ကလိထိုးစတာကနေ့ သူ့အစ်ကိုက ပြန်ကလိထိုးရင်း အောက်ခံဘောင်းဘီတွေပေါ် သူ့အစ်ကိုကို့ အပေါ်ကတက်ခွရင်း ကစ်စင်ဆွဲတဲ့ အခန်းလည်းရောက်ရော
ဟယ် မောင်နှမချင်း အဲ့လို နမ်းလို့ရလား ကိုကို
ရတာပေါ့ ညီမလေးရဲ့ အရမ်းချစ်ကြရင် အဲ့လိုနမ်းကြတယ် ဟိုးခေတ်ကဆိုရင် မောင်နှမချင်းတောင် လက်ထပ်ကြတာ
လက်ထပ်ကြတာ ဟုတ်လား အာ့ဆို ဟိုလိုလဲ လုပ်ကြတာလား
အေးပေါ့ ညီမလေးရဲ့ လင်မယားဖြစ်သွားရင် အဲလိုလုပ်ရတယ် မလုပ်လို့မရဘူး
ဟွန့် ရှက်စရာကြီး ကိုကိုလဲ ညီမလေးနဲ့ ဟိဟိ
ပြောနေရင်းနဲ့ ဘာတွေတွေးတယ်မသိ စကားဖြတ်ရင်းပြုံးပြီး လှည့်သွားတယ်၊
ကြည့်နေတဲ့ ဇာတ်လမ်းကလဲ အရှိန်က တက်လာပြီး ညီမလုပ်တဲ့သူက အစ်ကိုကို ဘောင်းဘီဆွဲချွတ်ပြီး အတင်းမှုတ်တဲ့ အခန်းလဲရောက်ရော ဟယ်ဆိုပြီး ဆတ်ကနဲ ထမလိုလုပ်လိုက်တာ ညှပ်ထားတဲ့ အောက်ကကောင်ကလဲ ဖျောင်းကနဲ လွတ်ထွက်သွားတယ်
ဟယ် ကိုကိုပြောတော့ ဟာသကားဆို
ငါလဲမသိပါဘူးဆို လာဆက်ကြည့်ရအောင် ဘာဖြစ်မလဲလို့ ကျနော်လဲ သူ့ဗိုက်ကလေးကို ကိုင်ပြီးအသာဆွဲထိုင်ခိုင်းလိုက်တော့ တောင်နေတဲ့ကောင်က သူ့ဖင်လုံးလုံး အိအိလေးကြားမှာ အမြောင်းလိုက် ဝင်သွားတယ်
ဟယ် ကိုကို လက်ဖယ်လေ
လက်မဟုတ်ဘူးဟ ကိုကို ရွှေပန်းလေး
ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ ကိုကို ကြီးလိုက်တာ ငယ်ငယ်တုန်းက သေးသေးလေးမဟုတ်လား
အေးဟုတ်တယ် ကိုကိုလည်း ဘာဖြစ်တာလဲ မသိဘူး အသားဖြူဆေးကြောင့်လားမသိဘူး
ညီမလေးလဲ ဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူး ဒီည
ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ ကျနော်ပါးကို ရွတ်ကနဲ နမ်းလိုက်တယ် မျက်နှာကလည်း ရဲနေတယ်
ရှက်နေတယ်ထင်ပါရဲ့ စိတ်လဲမရိုးမရွဖြစ်နေပုံပဲ ပြီးတော့ ဇာတ်လမ်းကို ဆက်ကြည့်တယ်
ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ကောင်မလေးက အတင်းမှုတ်နေတုန်း အစ်ကိုလုပ်သူက မသင့်တော်ဘူး တွေးတယ်နဲ့တူတယ်
စိတ်ထိန်းပြီး သူ့ညီမကို အတင်းတွန်းလွတ်တယ် သူ့ညီမလည်း ရှက်ပြီး သူ့အိပ်ရာကို ပြန်တဲ့အခန်း
ကိုကိုဖိုးသက် ဘာလို့ရပ်လိုက်တာလဲ ဘာဆက်ဖြစ်လဲ ကြည့်ရအောင်လေ
ခဏ ညီမလေး ကိုကို ရှူးပေါက်ချင်လို့
မဖယ်ချင်တဲ့ ပုံနဲ့ထတယ် ပင်တီလေးလဲ ကွက်နေတယ် ဖီးလ်လာနေတဲ့ပုံပဲ
ကျနော်လဲ တောင်နေတဲ့လီးကြီးကို အသာဖိပြီး အိမ်သာကို ပြေးထုရတော့တယ် ထုသာထုတယ် မပြီးဘူး။ မျက်စိထဲမှာ ညီမလေး တင်ပါးလုံးလုံးလေးပဲ မြင်နေတယ် လီးကလဲ ပိုကြီးလာတယ် နောက်ဆုံးတော့ သေးပဲမရရအောင်ပေါက်ပြီး လီးတရမ်းရမ်းနဲ့ ပြန်ထွက်လာရတော့တယ်၊ ညီမလေးကတော့ ရပ်ထားတဲ့ ကားကို ဆက်ကြည့်နေတယ်၊ မောင်နှမနှစ်ယောက်နောက်ဆုံးစိတ်မထိန်းနိုင်ပဲ ကုတင်ကူးပြီး နမ်းနေတဲ့အခန်း သူကျနော်ကိုတောင် သတိမထားမိဘူး ကြည့်ရင်းနဲ့ တီရှပ်အောက်ကို လက်နိုက်ရင်း နို့တွေကို ပွတ်နေတယ် ကျနော်လည်း အသာလေး နောက်ကရပ်ကြည့်နေလိုက်တယ်
အောကားထဲမှာ နမ်းနေရင်းနဲ့ အစ်ကိုက ညီမကို မှုတ်တဲ့အခန်းရောက်ရော သူအသက်ရှူသံတွေ မြန်လာပြီး
နောက်ကိုလှည့်ကြည့်တော့ ကျနော့်ကို တွေ့သွားတယ် အောကားကိုပိတ်ပြီး
ကိုကို ဘယ်တုန်းကရောက်နေတာလဲ အောက်ကဟာကြီးကလည်း ထောင်လို့ ဟိဟိ
နင်နို့တွေ့ကို ကိုင်နေတာမလား ပြစမ်းပါဦး နင့်နို့တွေ ဘယ်လောက်ကြီးပြီလဲ
ပြမယ်ပြမယ် ညီမလေး ကလေးမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာ
ပြောပြောဆိုဆို ထပြီး သူ့တီရှပ်ကို ဆွဲချွတ်လိုက်တော့ နို့ဖူးဖူးငုံငုံလေးက ဝင်းကနဲပေါ်လာတယ် နို့သီးခေါင်းတစ်ဖတ်က မထွက်သေးဘူး။ နီနီရဲရဲလေး ဗိုက်သားလေးတွေကလဲ ဖြူဖြူဖောင်းဖာင်းလေး ပင်တီလေးက ဖူးနေတဲ့ အဖုတ်သေးသေးလေးကြားမှာ ညှပ်နေတယ်၊
ကိုကိုဒီမှာကြည့် မယ်တွေလို လမ်းလျှောက်ပြမယ်၊
ဒီအတိုင်းမလှဘူး အကုန်ချွတ်လိုက် ဘောင်းဘီပါချွတ်
ကိုကိုလဲ ကာယဗလမောင်တွေလိုပြမယ် ပုဆိုးချွတ်မယ် ညီမလေးလဲချွတ် ဟုတ်ပြီလား
ပုဆိုးကို ချွတ်လိုက်တော့ လီးက သွေးကြောအမြောင်းမြောင်းနဲ့ တောင်နေတာကို ညီမလေး ပါးစပ်လေးဟပြီး ကြည့်နေတယ် ကျနော်လည်းသူ့ရှေ့မှာ ထိုင်ပြီး ပင်တီလေးကို အသာဆွဲချလိုက်တော့
…………. ……….. ………. ……….
သွေးကြောစိမ်းစိမ်းလေးတွေနဲ့ ဖောင်းကားနေတဲ့ ဆီးခုံလေးက ပထမပေါ်လာတယ် နဲနဲအောက်ကို ဆွဲချလိုက်တော့ ဖောင်းဖောင်းအစ်အစ်လေး ဖြစ်နေတဲ့ ဘေးနှုတ်ခမ်းနှစ်ခုကြားက ပန်းရောင်မြစ်လေးတစ်စင်း ပေါ်လာတယ် ညီမလေးရဲ့စောက်ပတ် ဖောင်းဖောင်းဆူဆူလေးဟာ အမွှေးနုလေးတွေ ခပ်ပါးပါးနဲ့ အိအိစက်စက် ပန်းရောင်လေး သန်းနေတယ်၊
ညီမေလး နင် ရာသီလာပြီလား
ညီမလေး ရှစ်တန်းအောင်ကတည်းက အပျိုဖြစ်နေပြီ ကိုကိုရဲ့
ညီမလေးက အပျိုဖြစ်နေပေမယ့် လူကောင်လဲ ညှက်သလို
နို့လေးကတော့ ကြက်ဥလုံးသာသာပဲ ရှိသေးတယ်၊ ပိပိလေးကတော့ အပျိုမတစ်ယောက်လိုပဲ ဖောင်းဖောင်းလေး ဖြစ်နေပြီ
ကိုကိုအခန်းက ပူတယ်နော် ညီမလေး ရေချိုးချင်တယ်
ချိုးလေးညီမလေး ကိုကို့ရေချိုးခန်းထဲမှာပဲချိုးလိုက် အဲဒီမှာ တဘက်ရှိတယ်
သေသေချာချာ ဂျီးတွန်းနော် အဟင်း
ကိုကိုနော် ညီမလေးက ရေချိုးရင် ဂျီးကို နေရာအနှံတွန်းပြီး ချိုးတာပါနော် ကိုကိုလို ညစ်ပတ်မဟုတ်ဘူး သိရဲ့လား ဟွန်း
အေးပါအေးပါ ရေချိုးပြီးထွက်လာမှ စစ်ဆေးရမယ် ငါ့ညီမ ညစ်ပတ်လား မညစ်ပတ်လား ဆိုတာ ဟားဟား
ပစ္စည်းအရှိန်ရယ် အခန်းထဲက အဲယားကွန်းကလည်း မအေးတာနဲ့ ဒင်းကလေးတော့ ပူနေပြီထင်ပါရဲ့
သူရေချိုးနေတုန်း အကြံနဲ့ တစ်ခါတစ်လေမှ လိမ်းဖြစ်တဲ့ အုန်းဆီဘူးကို အသည်းအသန် လိုက်ရှာပြီး ကွန်ပြူတာရှေ့ကိုပြန်သွား အ၀တ်တွေ အကုန်ချွတ်ရင်း သူ့ကိုပြလို့ကောင်းမယ့် ကားလေးတွေ လိုက်ရှာရတယ် Blacked တို့ Exxxtreme small ဘာညာလေးတွေဆို မဆိုးဘူး
ကောင်မလေးတွေက ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေ အမွှေးမပေါက်သေးတာလား ရိတ်ထားတာလားတော့ မသိ
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကြည့်ရင်းဒေါင်းရင်းနဲ့ကို အောက်ကကောင်က မာန်တဖီဖီဖြစ်လာပြီ
ဒီလောက်ဖြစ်တဲ့ကောင် အုန်းဆီနဲနဲယူပြီး ရွှဲနေအောင်လိမ်း ဖြစ်ညှစ် ပွှတ်သပ်ပေးလိုက်တော့ မြွေဟောက်ကြီးလို ပါးပြင်းတရမ်းရမ်းနဲ့ လန်းလန်းလန်းလန်းကို ဖြစ်နေတော့တာပဲ
ဖိုးသက် ဖင်ပြောင်ကြီး ကွန်ပြူတာရှေ့မှာ ရွှေပန်းကြီးကလည်း ဘာတွေပေနေတာလဲ
လာပြန်ပြီ ပေါင်ပေါ်ကို ရေပြောင်အောင်မသုတ်ပဲ ဖင်ပြောင်လေးနဲ့ ပေါင်ပေါ်ကို ဆွေ့ခနဲ ရောက်လာပြန်တယ် ပေါင်ပေါ်လို့သာပြောပေမဲ့ အ၀တ်ဗလာ ဖြစ်နေတဲ့ သူ့ရေစိုဖင်လုံးလေးဟာ အောက်က ထောင်နေတဲ့ ငပြောင်ကောင်ကို အမြောင်းလိုက်ကလေးဖိပြီးထိုင်မိလျှက်သား ဖြစ်သွားတယ် ငပြောင်ကောင်လဲ ဓာတ်လိုက်သလို ဆတ်ကနဲ ဖြစ်သွားပြီး ထိပ်ဖူးလေးက အရည်ကြည်တွေတောင် စို့လာတယ်
ညီမလေး အပေါ်နဲနဲတက် ကိုကို့ ဟာကို ဖိမိနေပြီ
သူ့ကို အပေါ်နဲနဲတိုးခိုင်းလိုက်တော့ အောက်ကထောင်နေတဲ့ လီးဟာ ညီမလေး ပေါင်နှစ်လုံးကြားက လွတ်ထွက်လာပြီး သူ့စောက်ပတ်ဖူးဖူးလေးကြားကကျော်ပြီး အပြင်ကိုကျော်ထွက်လာတော့တယ်
ဟိဟိ ကိုကို ဘယ်လိုလေးလဲ မသိဘူး ယားတယ် ညီမလေးကို အလှဆီ လိမ်းပေးဦးလေ
ဘဲကြီးတစ်ဘွေက ကောင်မလေးကို ဆီလိမ်းနှိတ်ပေးတဲ့ကား ကွက်တိပဲ
အုန်းဆီနဲနဲယူ လက်နှစ်ဖက်ကိုစွတ်ပြီး သူ့ဆီးခုံမို့မို့လေးပေါ်ကို တင်လိုက်တယ်
ကိုကိုဖိုးသက် အလှဆီက ကိုယ်လုံးကို လိမ်းရမှာလေ
နင်ဘာသိလို့လဲ ဒီအလှဆီက ပေါင်ခြံတွေ မမဲအောင် လိမ်းပေးရတာဟ
သူလဲ အူကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေတုန်း ဆီးခုံမို့မို့လေးပေါ်ကို ဆီသုတ်ထားတဲ့ လက်ကလေးနဲ့ ပွတ်လိုက်တယ်၊ ခါးလေး ကော့ကနဲ့ ဖြစ်သွားတုန်း၊ အားနေတဲ့ လက်တစ်ဖက်နဲ့ နိုးဖူးဖူးလေးကို ပွတ်သတ်ပေးနေလိုက်တယ်၊သူမျက်လုံးလေး မှေးပြီး ဖွင့်ထားတဲ့ အောကားထဲက ဘဲကြီးရဲ့ လီးအကြီးကြီးကို ကောင်မလေးက
စပါယ်ရှယ် စုတ်ပေးနေတဲ့ အခန်းကို ပါးစပ်လေးဟပြီး ကြည့်နေတယ်၊
ကျနော်လည်း စိတ်တွေအရမ်းတင်းလာပြီး ဂုတ်ဖြူဖြူနုနုလေးကို နမ်းလိုက်
နားရွက်ဖျားလေးကို လျှာလေးနဲ့ တို့လိုက် လုပ်ရင်း စောက်ပတ်ဖောင်းဖောင်းလေးကြားကို ညပ်နေတဲ့ ပြောင်တင်းနေတဲ့ လီးကြီးက တဆတ်ဆတ်နဲ့ လှုပ်လာတယ်
အား ကိုကို ညီမလေး ဘယ်လိုကြီးလဲမသိဘူး တလှပ်လှပ်နဲ့
မကြောက်နဲ့ ညီမလေး ကိုကို့ဟိုဟာကို ကိုင်ထားနော် ညီမလေးပျော်အောင် ကိုကို လုပ်ပေးမယ်
သူ့လက်တစ်ဖက်ကို ဆွဲရင်း တောင်နေတဲ့ လီးပေါ်ကို တင်ပေးလိုက်တယ်၊
ဆီးခုံလေးပေါ် ပွတ်နေတဲ့ လက်ကိုလည်း နှုတ်ခမ်းသားလုံးလုံးအစ်အစ်လေးနှစ်ခုကြားကိုရွှေ့လိုက်တယ်၊ ညီမလေးလဲ လှုပ်လှုပ်ရွရွ ဖြစ်လာပြီး ကျနော့်လီးကြီးကို အတင်းဖြစ်ထားရင်း ဖင်လေးကို လှုပ်လာတယ်၊
ညီမလေး အရမ်းမညှစ်နဲ့ အသာလေး ပွတ်ပေးနော်
ကိုကို အလှဆီကို များများလူးပေးနော် ညီမလေး အဲ့ဒါကိုကြိုက်တယ်
အုန်းဆီဘူးကိုယူရင်း ညီမလေးရဲ့ အဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးပေါ်ရော နီရဲပြီး အကြာအပြိုင်းပြိုင်းနဲ့ တောင်နေတဲ့ လီးကြီးပေါ်ကိုရော အကုန်လောင်းချလိုက်တယ်
စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးဟာ ရွှဲနေတဲ့ဆီတွေနဲ့ ပန်းရောင်သမ်းလာပြီး ပြောင်ပြောင်လေး ဖြစ်လာတယ်
ညီမလေးလည်း ဆီတွေပေနေတဲ့ လီးကြီးကို အသာလေးကိုင်ရင်း သူ့အဖုတ် ဖောင်းဖောင်းလေးနဲ့ ပွတ်ရင်း အသက်ရှူသံတွေ မြန်လာတယ်
ညီမလေးရဲ့ အစိသေးသေးလေးက မာလာတာကို သတိထားမိတယ် ညင်ညင်သာသာလေး တစ်ချက်လောက် ပွတ်ပေးလိုက်တော့ တွန့်ကနဲ့ဖြစ်သွားပြီး ကျနော့်ရင်ဘတ်ပေါ်ကို ခေါင်းလှန်ချရင်း
မျက်စိကိုစုန်မှိတ် နှုတ်ခမ်းလေးတွေ တဆတ်ဆတ် တုန်လာရှာတယ် နုထွေးပြီး ရဲရဲနီနေတဲ့ ညီမလေးရဲ့နှုတ်ခမ်းလေးကိုငုံပြီး ကတုန်ကရင်နဲ့ နမ်းစုပ်လိုက်ရတဲ့ အချိန်မှာတော့ လောကကြီးမှာ ကျနော့်လောက် စိတ်ချမ်းသာနေတဲ့သူ မရှိတော့ဘူးလို့ကို ထင်မိတော့တာပဲ
အွန်းကိုကို အဲ့လိုမနမ်းနဲ့လေ ညီမလေးနဲ့ ကိုကိုက မောင်နှမတွေလေ
ညီမလေးရယ် ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး ကိုကိုတို့က မင်းမျိုးမင်းနွယ်တွေလေ မောင်နှမချင်းပဲ လက်ထပ်ကြရတာ နောင်လဲ ညီမလေးနဲ့ ကိုကိုက လင်မယားတွေဖြစ်ရမှာ မရှက်နဲ့နော်
ဖေဖေတို့ မေမေတို့ကလည်း မောင်နှမတွေပဲ ညီမလေးရဲ့ ညီမလေးက ငယ်သေးလို့ မသိသေးတာ ဒါပေမယ့် ကိုကိုတို့ ခုလောက်ချစ်နေကြတဲ့ အကြောင်းကို သွားပြီး မပြောပြနဲ့ဦးနော် နောက်မှ ကိုကိုပြောမယ်
နောင်မှ ဖြစ်ချင်တာဖြစ် ပါးစပ်ထဲရှိတာ လျှောက်ပြောလိုက်တယ်
ဒါဆို ဖေဖေနဲ့မေမေက မောင်နှမတွေပေါ့ ဟုတ်လားဖိုးသက်
အေးဟုတ်တယ်ဟ လာလာ ခုတင်ပေါ်ကို သွားရအောင် ညီမလေးရဲ့ စိတ်တွေကို တိမ်ပေါ်ပို့ပေးမယ်
ဘာလုပ်မလို့လဲ ဖိုးသက်နော် ငါကြောက်တယ်
ညီမလေး စိတ်ကိုလျှော့ထားနော် ကိုကို ညီမလေးကို အရမ်းချစ်တာ သိတယ်မလား ကလေးလေး
ညီမလေးကိုချော့ရင်း ကစ်စင်ငုံဆွဲလိုက်တယ် ဆွဲနေရင်းနဲ့ပဲ ပွေ့ချီပြီးခုတင်ပေါ်ကို ခေါ်လာလိုက်တယ်၊ ညီမလေးရဲ့ ကိုယ်လုံးလေးက အိအိစက်စက်နဲ့ ထင်သလောက်တောင် လေးမနေသလိုပဲ
ခုတင်ပေါ်ကိုအသာချရင်း နို့ဖူးဖူးလေးကို ယုယုယယ စို့ပေးလိုက်တော့ ညီမလေးက အတင်းဆွဲဖက်ထားတယ်
အ ကိုကို အဟင့်
နို့လေးတွေကို ဘယ်ပြန်ညာပြန် စို့ပေးရင်း စိထားတဲ့ ပေါင်လုံးလေးတွေကြားကို ပွတ်ပေးလိုက်တော့ လက်ဝင်ရုံလေး ဟပေးတယ် ဆီလေးတွေပေနေတဲ့ အဖုတ်မြောင်းကြားကို အထက်အောက် ပွတ်ပေးရင်း ချက်ကလေးကို လျှာလေးနဲ့ လျက်လိုက်တော့ ဖင်လေးရှုံရင်း အဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးက ကော့လာတယ်
ကျနော်မနေနိုင်တော့ဘူ ပန်းနုရောင်သမ်းနေတဲ့ အဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးတစ်ခုလုံးကို ပါးစပ်အပြည့်ငုံရင်း လျှာနဲ့ နေရာအနှံ ထိုးမွှေလိုက်တော့ ပါးစပ်ထဲမှာ အပျိုနံသင်းသင်းနဲ့ ဆီတွေရော ညီမလေးဆီက ထွက်လာတဲ့
အမလေး ဖိုးသက်ရယ် ညီမလေး သေတော့မလား မသိဘူး ကောင်းလိုက်တာ
ရုတ်တရက် ယောင်သလိုအော်ရင်း တဆတ်ဆတ်နဲ့ တုန်သွားတော့တယ် ညီမလေးတော့ ပြီးသွားပြီ
ကျနော်ကတော့ ပါးစပ်ထဲမှာ ပြည့်နေတဲဟာတွေကို ညီမလေးရဲ့ စောက်ဖုတ်လေးပေါ်ကို ထွေးချလိုက်တယ်
အောက်ကကောင်ကြီးကတော့ စားချင်တာ မစားရသေးတော့ ပေါက်ထွက်တော့မတတ် တောင်တုန်း
ကိုကိုရယ် ညီမလေးနေလို့ကောင်းလိုက်တာ တုန်တုန်ပြီးတော့ ကောင်းလိုက်တာ
ဒါအစပဲရှိသေးတယ် ညီမလေးရဲ့ ဒီထက်ပိုကောင်းအောင် ကိုကို ထပ်လုပ်ပေးဦးမယ် ခုတော့ ကိုကိုဟာကို တစ်လှည် အာဘွားပေးဦးနော်
ဘယ်လိုပေးရမှာလဲ ဆီတွေနဲ့ ရွံ့စရာကြီးကို
ဆီတွေနဲ့ဆိုတော့ ပိုပြီးကောင်းတာပေါ့ ညီမလေးရဲ့ ရေခဲချောင်းစုပ်သလို စုပ်ပေးနော်
ပြောပြောဆိုဆိုပဲ ခေါင်းလေးကို အသာကိုင်ပြီး လီးနဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို ပွတ်ပေးလိုက်တယ်၊ ညီမလေးလည်း ဆီတွေနဲ့ပြောင်နေတဲ့ အကြောအပြိုင်းပြိုင်း လီးကြီးကို ကြည့်ရင်း စိတ်တွေထန်လာတဲ့ပုံပဲ
မရဲတရဲနဲ့ ပါးစပ်လေးဟ ငုံလိုက်တယ် ကျနော်လဲ နားထင်တွေပါ ကျင်ကနဲ ဖြစ်သွားတယ်၊ ထိပ်ဖူးလေးတွေကို အတင်းစုပ်ရင်း တံတွေးတွေနဲ့ စိုစွတ်လာတဲ့ အထိအတွေ့ နွေးနွေးကြောင့် မထိန်းနိုင်ပဲ
အတင်းထိုးသွင်းလိုက်တော့ အွတ်ခနဲဖြစ်ပြီး ပါးစပ်ထဲကနေ တံတွေးတွေရွှဲနေတဲ့ လီးကြီးကို အန်ထုတ်လိုက်တယ်
ကိုကိုရယ် ဖြေးဖြေးလုပ်ပါ အာခေါင်ထဲအထိတောင်ရောက်တယ်
ဆောရီးဆောရီး ညီမလေး ကိုကို စိတ်လွတ်သွားလို့ ကိုကိုညီမလေးရဲ့ စောက်ဖုတ်လေးကို ကြည့်မယ်နော်
ညီမလေးရဲ့ စောက်ဖုတ်လေးက ကျနော့်ရဲ့ တံတွေးတွေ ဆီတွေနဲ့ ရွှဲနေပြီ ပိတ်နေတဲ့ နှုတ်ခမ်းသားလေးနှစ်ဖက်ကို ဖြဲကြည့်လိုက်တော့ ပန်းနုရောင် အတွင်းသားလေးနဲ့ နားကြပ်တံ ခေါင်းလောက်ရှိတဲ့ အပေါက်သေးသေးကို တွေ့ရတယ် လျှာလေးနဲ့ အစိလေးကို လျှက်ပေးလိုက်တော့ အတွင်းထဲက အရည်ကြည်လေးတွေ ထွက်လာတယ်
ပေါင်လေးနှစ်ချောင်းကို အသာမပြီး ကျနော်ပေါင်ပေါ်ကို ခွတင်လိုက်တယ်
ကိုကို မလုပ်ပါနဲ့ ညီမလေး နာမှာကြောက်တယ်
မနာပါဘူး ညီမလေးရယ် နာရင်ဆက်မလုပ်တော့ဘူးလေနော်
တံတွေးကို လက်ထဲထွေးထည့်ပြီး ဆီတွေနဲ့ ပြောင်နေတဲ့ ဒစ်ဖူးကိုသုတ်လိမ်းလိုက်ပြီး
ညီမလေးရဲ့စောက်ဖုတ် နှုတ်ခမ်းသားတလျှောက်နဲ့ အစိလေးကို ပွတ်ပေးလိုက်ရင်း ဖင်ပေါက်လေးကို လက်မလေးနဲ့ ဆွပေးလိုက်တယ်
ဖြေးဖြေးပဲ ထည့်နော်ကိုကို နာရင်အော်မှာ
အော်ပေါ့ အိမ်မှာနင်နဲ့ငါပဲရှိတာလို့ တွေးရင်း စောက်ဖုတ်လေးထဲကို ဒစ်မမြုတ်တမြုတ် သွင်းလိုက်တယ်၊ အင်းကနဲ သံရှည်ဆွဲညည်းရင်း ညီမလေးက ဖင်လေးကို ကော့ပေးရှာတယ်
အဲ့ဒါနဲ့ အဖုတ်လေးကို ဖြဲပြီး တံတွေးထပ်ပြီး ထွေးထည့်လိုက်တယ်
ပြန်ထည့်ကြည့်လိုက်တော့ ဒစ်တစ်ခုလုံး မြုပ်သွားတယ်
အစိလေးကို အသာလေးပွတ်ပေးနေရင်း ၀ငျသလောကျလေး ကစားပေးနေလိုက်တယ်
အရည်တွေ ပိုပိုပြီးထွက်လာပြီး ပေါင်လေးတွေ ပိုကားပေးတာနဲ့ နဲနဲအားလေးထည့်ပြီး သွင်းကြည့်လိုက်တော့
အ အား ဖိုးသက် နာတယ် အား
စူးကနဲ ထအော်လိုက်တာ ကျနော်လန့်တောင်သွားတယ်
ဆက်မသွင်းတော့ပဲ အော်နေတဲ့ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးကို ငုံထားလိုက်တယ်
လျှာကို ပါးစပ်ထဲ ထိုးထည့်လိုက်ပြီး ညီမလေးရဲ့ လျှာနဲ့ နပမ်းလုံးနေရင်း ခဏနေတော့ သူဖင်လေးကို လှုပ်လှုပ်ပြီး ကစားလာတယ် နဲနဲခံနိုင်လာပုံပဲ
ကျနော်လဲ ကစ်စင်ဆွဲနေရင်းပဲ လီးကို အဆုံးထိ ဖြေးဖြေးချင်း ထည့်လိုက်တော့ သူကျနော့် ကျောကုန်းကို
အား အ ကောင်းလိုက်တာ ညီမလေး မနာတော့ဘူး အရမ်းလုပ်ပေးပါတော့ အထဲက ယားလာပြီ
ကောင်မလေး ဖီးလ်တွေ စွတ်တက်နေပြီးတော့ အတင်းကော့ကော့ပေးတာ
ကျနော်လဲ ညှာမေနတော့ဘူး ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ဆွဲထောင်ပြီး တဖြောင်းဖြောင်းနဲ့ ဆောင့်လိုက်တာ
ကျနော်တို့ မောင်နှမနှစ်ယောက် အသံရော လီးနဲ့စောက်ဖုတ် ရိုက်သံတွေရော ဆူညံသွားတော့သည်။
ညီမအရင်းကို လိုးနေရတယ်ဆိုတဲ့ အသိရယ်
နူးညံ့ပြီး ကျပ်ထုပ်နေတဲ့ အဖုတ်နွေးနွေးရဲ့ အထိအတွေ့တွေနဲ့ ကျနော့်မှာ
အချက် ၂၀ တောင်ပြည့်အောင်မဆောင့်နိုင်ပဲ ညီမလေးရဲ့အဖုတ်ထဲမှာပဲ ဖြန်းကနဲ ဖြန်းကနဲ ပြီးသွားလိုက်တာ ရှိသမျှသုတ်တွေတောင် အကုန်ကုန်သွားသလို ခံစားလိုက်ရတယ်
ညီမလေးလဲ ကျနော်ပန်းလိုက်တဲ့ သုတ်တွေရဲ့ အထိအတွေ့ကြောင့် ထင်ပါရဲ့
တဆတ်ဆတ်တုန်ပြီး နောက်တစ်ခါ ပြီးသွားတယ်
ညီမလေး ညီမလေး ပြီးသွားပြီလား ညီမလေး
ဒင်းကလေးက ပထမဆုံး အတွေ့အကြုံကြောင့်ပဲလား ဖီးလ်အတက်လွန်သွားသလားမသိ
အိပ်ပျော်သလို သတိလစ်သလို မျောသွားတယ်နဲ့တူတယ် ခေါ်လို့တောင် မရတော့ဘူး။ မျက်လုံးကြီးမှိတ်ပြီး ဇိမ်ခံနေတယ်၊ ကျနော်လည်း အသာလေးထပြီး စောက်ဖုတ်ထဲက တောင်နေသေးတဲ့ လီးကိုဆွဲထုပ်လိုက်တော့
သုတ်တွေရော အရည်တွေရော ပွက်ကနဲ ထွက်လာတယ်၊ စောက်ဖုတ်လေးကို ဖြဲကြည့်လိုက်တော့ သွေးစလေး နဲနဲတွေ့ရတယ်၊ သိပ်တော့မကွဲသွားဘူးနဲ့တူတယ်
အပျိုမှေးလှန်သွားပုံပဲ တဘက်နဲ့သုတ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ ညီမလေးကို စောင်ခြုံပေးလိုက်တယ်၊
သူယူပါစေ ပထမဆုံးအတွေ့အကြုံ ဒီလောက်ကောင်းမှန်းသိသွားပါစေပေါ့။
ကျနော်လဲ ရေချိုးခန်းထဲကို ထွက်လာရင်း သွေးစတစ်ချို့ပေနေတဲ့ လီးကြီးကိုကြည့်ရင်း
မင်းအတွက်တော့ ကြုံရင်ကြုံသလို အောင်းလို့ရတဲ့ စောက်ဖုတ်လေးတစ်ခုတော့ ထီပေါက်ပြီဟလို့တောင် တိုးတိုးလေး ရေရွတ်လိုက်မိသည်။